XOG: Madaxweynaha Puntland & Madaxda Wasaaradda Difaaca ee dalka Itoobiya oo yeeshay kulan khaas ah, maxayse ka wada hadleen? – Puntlandtimes
XOG: Madaxweynaha Puntland & Madaxda Wasaaradda Difaaca ee dalka Itoobiya oo yeeshay kulan khaas ah, maxayse ka wada hadleen?
ADDIS ABABA(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo kusugan dalka Itoobiya, gaar ahaana magaalada Addis Ababa ayaa kulan gaar ah shalay la yeeshay madaxda ugu sareysa wasaaradda Difaaca ee dalka Itoobiya oo ay ka wada hadleen arrimaha ka dhaxeeya labada dhinac, gaar ahaana dhinaca Ammaanka.
Madaxweynaha Puntland ayaa si gaar ah kulan ula yeeshay wasiirka Difaaca ee dalka Itoobiya ama gaashaanshiga oo ay ka wada hadleen ammaanka xaduuda dheer ee u dhaxaysay labada dhinac, waxaana kulanka aan jirin warar rasmi ah oo ka soo baxay.
Puntland & Itoobiya iskaashiga ka dhaxeeya ee dhinaca ammaanka ah ayaa ah mid horey u jiray, waxaana Xukuumadda hadda jirta ay dardargalinaysaa qorshaha ammaanka ee labada dhinac horey uga dhaxeeyey.
Madaxweynaha Puntland ayaa u sheegay Itoobiya in ay Puntland dagaal kula jirto kooxaha Argagixisada ah ee Shabaab, oo ay ka doonayso wadamada gobalka iyo caalamkaba in ay ka taageeraan la dagaalanka kooxahaas xagjirka ah.
Mr, Deni ayaa la kulmaya maanta qaar kamid ah madaxda sare ee dalka Itoobiya, oo ay ka wada hadli doonaan xariirka labada dhinac iyo arrimaha guud ee siyaasadda Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland ayaa ka hor 14-ka bishan dib ugu laabanaya magaalada Garoowe ee caasumada Puntland, isagoo furaya kalfadhiga baarlamaanka oo ay tahay sida dastuuriga ah.